ဗဒင် - Heaven Tune
Available Lyrics & Download
Snow Melody Music
ကျင်လျန်းမုံ – ကိုယ်တော်အမြဲရှိတယ်
င, ဂ G
ဆရာဦးညွန့်လှ – ဘဝသစ်
အရူပ (THE INVISIBLE )
ဗဒင် သီဆိုရေးစပ်ခဲ့သော ခရစ်ယန် ဓမ္မသီချင်းများကို လက်လှမ်းမီသလောက် စုစည်းထားပါသည်။
သိုးမဲဟောင်းတွေအကြောင်း(နေရာ) ဗဒင် 4:40
ပန်းခင်းထဲမှာ (Never Say Die) ဗဒင် 3:38
အပျိုစင်အနာဂတ် (မနက်ဖန်အတွက်မစိုးရိမ်နဲ့) ဗဒင် 3:53
အလှဆင်သူ ဗဒင် 4:32
အသစ်သောအသက်တာ ဗဒင် 4:19
ခရစ်တော် ဗဒင် 4:57
အား အောင်ပဏ်း (အနက်ရှိုင်းဆုံးချစ်မယ့်သူ) 3:40
ခရစ်တော်ကျန်နေရင် ထွဏ်းထွဏ်း 4:36
<iframe class="cue-embed" src="https://www.heaventune.com/?cue_embed=%e1%80%97%e1%80%92%e1%80%84%e1%80%ba&#038;cue_theme=default" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" width="100%" height="400"></iframe><script src="https://www.heaventune.com/wp-content/plugins/cuepro/assets/js/embed.min.js"></script>
၁၉၉၂ခုနှစ်မှာ တေးရေးတေးဆို ဗဒင်ရဲ့ နေရာဆိုတဲ့သီချင်းဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး တားမရဆီးမရ၊ ဟုန်းဟုန်းတောက် ကြောက်ခမန်းလိလိ ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခေတ်သီချင်းနားခောင်တယ်ဆိုရင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ဟိုဘက်၊ ဒီဘက် ဘယ်သီချင်းဖွင့်တယ်ဆိုပြီး အပြိုင်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ခေတ်၊ လူငယ်တွေဟာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တယ်ဆိုတာ များသောအားဖြင့် သီချင်းနားထောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ အလှူ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ နောက်ဆုံး ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ တရားထဲမှာ ကြားကြားနေရတဲ့ သိုးမဲတွေအကြောင်း၊ အိမ်တိုင်း၊ လမ်းတိုင်း ကက်ဆက်ဖွင့်တဲ့နေရာတိုင်း အမုန်းနားထောင်ရတာ၊ ကြားရတာက အဆိုတော်ကြီး ဗဒင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကြုံတုန်းလေးရေးမယ်ဆိုရင် ဗဒင်ဟာ သူ့စီးရီးဖြစ်တဲ့ နေရာထွက်ပြီး နှစ်အတော်ကြာပေါက်ခဲ့ပေမဲ့ သူ့ရုပ်ကို ဘယ်သူမှမမြင်ဖူးကြ။ “နေရာ” စီးရီးထွက်ပြီးတော်တော်ကြီးကြာမှ ဒုတိယစီးရီးဖြစ်တဲ့ “အရှိအတိုင်း”စီးရီးကိုထုတ်ဝေကာ ယင်းအချိန်မှ သီချင်းစာအုပ်ပါပေါင်းချုပ်ထွက်လာပြီး ယင်းသီချင်းစာအုပ်ပေါင်းချုပ်ကာဗာတွင် ပုံပါလာသောကြောင့် စျေးထဲတွင် အရောင်းရဆုံးနှင့် လက်သည်တွေလက်မလည်ရောင်းခဲ့ရသော သီချင်းစာအုပ်လဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဤနေရာတွင် ကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းမီသလောက်လေး သူဆိုတဲ့သီချင်းကော၊ သူ့သီချင်းသူများဆိုခဲ့တာကော ထားသွားပါမယ်။တဆက်တည်း..
ဝီကီပီးယားမှာဖော်ပြတဲ့ ဗဒင်အကြောင်းကိုလဲ ထပ်မံဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဗဒင်သည် နာမည်ကျော်အဆိုတော်မဖြစ်မီအချိန်က သီချင်းရေးဆရာတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ ဇော်ရည် သီဆိုခဲ့သော “ရိုးရိုးအေးအေးကြီးကိုပဲ” နှင့် ဂျေမောင်မောင် သီဆိုသော “အသည်းစွဲ” သီချင်းများမှာ ဗဒင် အဆိုတော်မဖြစ်မီ အချိန်က ရေးစပ်ခဲ့သော သီချင်းများထဲမှ ထင်ရှားသော သီချင်းများဖြစ်ပါတယ်။
ဗဒင်သည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် “နေရာ” အမည်ရှိသော ပထမဆုံးစီးရီးကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ “နေရာ” စီးရီး၏ မူပိုင်ထုတ်ဝေသူမှာ ဗဒင်၏ ကွယ်လွန်ပြီးခဲ့သော အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ဦး၏ မိခင်ဖြစ်ပြီး သူ့အား မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “နေရာ” အခွေသည် စတင်ထွက်ရှိသည့်နေ့မှစ၍ သူ၏ ဇာတိမြို့ဖြစ်သော အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ရေပန်းအစားဆုံး သီချင်းစီးရီးဖြစ်ခဲ့ပြီး မကြာမီအချိန်အတွင်းတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး တောမြို့များပါမကျန် ပျံ့နှံ့ နာမည်ကျော်ခဲ့သည်။
နေရာ စီးရီးအတွက် ကက်ဆက်ခွေ ကာဗာကတ်ဒ် ၁ သိန်းကျော်နှင့် သီချင်းစာအုပ်ပေါင်း ၅ သိန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ရသဖြင့် မြန်မာ့ဂီတသမိုင်းတွင် ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စီးရီးအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြား မြို့ကြီးများသာမက ကျေးလက်တောရွာများတွင်ပင် ဗဒင်၏ သီချင်းများက ကျော်ကြားခဲ့သည်။
နေရာ စီးရီး ထွက်ရှိပြီးနောက် အချိန်အတော်ကြာသည်အထိ ဒုတိယစီးရီးကို မထုတ်ဝေခဲ့ပေ။ “ဒီအတိုင်းပဲ” ဟု အမည်ရသော သင်္ကြန်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သာ အခြားအဆိုတော်များနှင့် တွဲဖက်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဗဒင်သည် နေရာ နှင့် အရှိအတိုင်း တေးအယ်လ်လ်ဘမ် စုစုပေါင်း ၂ ချပ်သာ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်ဟုရေးထားသော်လည်း “ဒီနေ့”ဟူသော အယ်ဘမ်တစ်ခုရှိသေးသည်ဟု ထင်သည်။
ဗဒင်သည်၁၉၆၄ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားပြီး ၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၁၊ အသက်(၃၇)နှစ်အရွယ်ထွင် ဘုန်းတော်ဝင်စားသွားသည်။
မျှဝေမယ် . . .
© 2021. Heaven Tune – MYANMAR CHRISTIAN SONGS, Developed by Khaingpwee